Home News Wasiir Maareeye oo Bilaabay in uu Ganacsatada ka qaado Lacag aysan...
Wasiir Maareeye oo Bilaabay in uu Ganacsatada ka qaado Lacag aysan Dowladdu Ogeeyn Iyo Muran ka dhashay!!
Waxaa maalmihii ugu danbeeysay soo baxaayay cabashooyin kadhan ah Wasaarada Ganacsiga iyo Warshadaha ee Xukuumadda Federalka Somalia iyo Wasiirka Wasaarada Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
Wasiirka Ganacsiga Xukuumada ayaa lagu eedeynayaa habdhaqan ka duwan Wasiiradii hore, kadib markii uu dhaqaale xoogan ku xiray Ganacsatada qaar.
Ganacsade Maxamed Cumar Maxamed oo kamid ah ganacsatada magaalada Muqdisho, ayaa sheegay inaanu tagis laheyn Wasaarada Ganacsiga.
Waxa uu tilmaamay in xiliyada ay howlaha uga baahdaan Wasaarada la hordhigo isbaarooyin lagu kala qaato dhaqaale kala duwan, waxa uuna tusaale usoo qaatay in shaqsiyaad ka hoos shaqeeya Wasiirka ay kala kulmaan Jeeb baarasho.
Isaga oo arrinkaan ka hadlaayay ayuu yiri ‘’Wasiirka ay howsha nagala dhexeyso marka hore aragtidiisa ayaa waxaa ka sokeysa inad dhaqaale ku bixiso shaqsiyaad isaga ka sokeeya, kadib aragtidiisa ayaa waxaa caqabado kala kulmeysaa Wasiirka’’
‘’Wasaarada dhaqaalaha sharciga ah oo ay naga rabto waxaa ka culus tan nooga baxeysa isbaarooyinka dadban ka hor inta aan la kulmin Wasiirka taasi waxa ay nagu khasabtay inaan wajiga ka dadbano Wasaarada oo aanan bixin dhaqaalaha nalaga rabo, waayo waxa meesha ka socdaa caadi maaha’’
Ganacsade Maxamed Cumar Maxamed, waxa uu sheegay in Xukuumada Somalia laga doonaayo inay xal u hesho waxyaabaha ka dhex socda Wasaaradaha qaar, waxa uuna cadeeyay inay dhibaato ku qabaan Wasaarada Ganacsiga.
Waxa uu tilmaamay inaanu jirin sharci dhigaaya bixinta dhaqaalo sharci daro ah, haddii uu jiro sharcigaasina aanu garaneynin goorta lasoo saaray.
‘’Wey na dhibeysaa inaan dhaqaale sharci daro ah ku bixino shaqsiyaad ka shaqeeya Wasaarada Ganacsiga, waxaanu diyaar u nahay inaan bixino wax waliba oo sharci nagu ah, balse wey na dhibeysaa inaan shaqsiyaad ku bixino lacago bir qaad ah’’
Sidoo kale, Ganacsade Maxamed Cumar Maxamed, ayaa tilmaamay in Xukuumada Somalia ay mar waliba ku celceliso u hogaansamida sharciyada, hase ahaatee dadku ay yihiin kuwo dhibaato ku qaba shaqsiyaadka howlahaasi loo xil saaray.
Sharciyada Wasaarada ayuu sheegay inay badan yihiin sidaa aawgeed ay diyaar u yihiin ka qeybqaadashada dadaal waliba oo lagu dhaqan galinaayo sharciyada, waa haddii xal loo helo isbaarooyinka dhexyaal Wasaaradaha.
Dhinaca kale, waxa uu cod dheer ku sheegay xitaa in Wasiirka Ganacsiga ay far ku godan tahay, hase ahaatee waxa uu Ganacsade Maxamed Cumar Maxamed ka gaabsaday inuu ka hadlo dhibta ay kala kulmaan Wasiirka.